U-Raclette udibanisa ukutya kunye nentlalo kunye nosapho kunye nabahlobo
U-Raclette udibanisa ukutya kunye nokulungelelanisa
Abaninzi bayayazi bayayithanda - i-raclette
U-Raclette, ukutya kwisitya esitshisa okanye ilitye elitshisayo kunye neepane ezidibeneyo sele iqela elidumile liye labhalwa iminyaka emininzi. U-Raclette akafanelekanga kuphela kwiphathi, kodwa kunye nobusuku obumnandi bentsapho, ngokuhlwa kunye nabangani, ngo-Eva onguNyaka omtsha okanye ngokuzalwa kwamanye amaxesha amaninzi, isidlo kunye nesitya esishushu phakathi kwetafile siyathandwa.
URuclette - ukutya okucocekileyo nokukhethekileyo
Kodwa yintoni eyenza lolu hlobo lokulungiselela ukutya ludume kangaka? U-Raclette unokudliwa kokutya kokuhlwa nangokuhlwa. Kuyafaneleka kakhulu kwiindawo ezibandayo ngaphakathi kwimozulu kodwa nakusihlobo kwintsimi, kwi-terrace okanye kwi-balcony raclette ingadliwa. Ubuhle apha nolu luleko kunye nolwazi olumnandi.
Yidla ndawonye ngokukhululekile
Amalungiselelo ama-raclettes alula, kuba ukuhlanganiswa okwenziweyo kwenzeka "ngumdla" kuphela ngqo kwitafile. Umdla ngamnye we-raclette uthatha ukutya kwakhe, afuna ukubeka kwi-raclette okanye ukufaka kwiipane.
U-Raclette naye ulungiselela izityalo
Kungakhathaliseki ukuba izitya, izityalo, inyama, intlanzi okanye i-sausage zidla, apha wonke umntu ufumana ukutya okuthandayo. Yonke into inokwenzeka ngexesha lokulungiselela. Enoba umntu usika ukutya okufunwayo kakade kwimpeni yangaphambili okanye "umenzi we-pancake" unciphisa ukutya okufunayo ngokwakhe.
Kwiipanethi zininzi izinto ezithandayo, nokuba ingqolowa, i-bacon, anyanisi, ama-mushroom, ama-shrimp, i-asparagus, imifuno, iincinci ezincinane zenyama okanye isobho, i-garlic - uluhlu luyaqhubeka ngonaphakade. Ngokuqhelekileyo, izithako zifakwe kwi-pancake nge-raclette cheese, kodwa zivutha kuphela kwaye zingabhaka.
Into ebalulekileyo ngale ndlela yokulungiselela yintlalontle. Akukho mntu uhleli etafileni ngaphandle kwegama aze adle. Ngenxa yokulungiswa ngqo kwitafile kukho ithuba elininzi lokuthetha, okwenza i-raclette ithandeke ngakumbi kwiinkampani ezinkulu okanye ngaphakathi kwintsapho.
Akukho mithetho eqinile kwilungiselelo kodwa kukho nezinye izinto zokuqwalasela kwi-raclette. U-Raclette uthetha ukulungiselela etafile, oko kukuthi - izithako akufanele ziphephe ixesha elide okanye ixesha lokubhaka.
Ukongezelela, ukutya akufanele kukhuphe amanzi amaninzi okanye isidingo esinamafutha ukulungiselela. Kule meko, kucetyiswa ukupheka okanye ukugcoba ukutya uze ushushu kuphela kwi-raclette.
Nangona bonke abantu behlala bejikeleze itafile, i-sizzles ezenziwe ngokwabo ezenziwe phezu kweplate okanye epanini. Oku kudla kumnandi kuminyaka yonke. Ukudibanisa ama-sauces ahlukeneyo, i-salads, idipsi okanye ezinye izilwanyana.
I-raclette ayidabuli nje, kwaye isasaza ukufudumala. Yiyiphi into engayaziyo okanye engazange ifike ngcamango - le fomu yokupheka ayifanelekanga kuphela ukulungiselela ukutya okusemgangathweni kunye nokutyhukela okumnandi kunokulungiswa nale nkonzo yomzi.
Hlalani kunye kunye nidle ndawonye
Ngokomzekelo, amakhiwane aneenyosi kunye nekhesi ye-cream angalungiswa, okanye i-Nutella ingatshiswa ngebhanana. Ukucinga akukho nomda wokutya ngale ndlela.
Ukuba awuyithandi i-Raclette ishizi, ungaphinda ugrinate iipanethi zayo kunye ne-Gauda, ​​i-Edammer okanye i-Mozarella, ngoko nanku, akukho mda kumcabango wakho.
Uhlobo olutsha lwe-raclette zixhobo kunye ne-fondue edibeneyo
Ephakathi kwe raclette ibhodwe le-fondue lifakwe. Utshintsho kunye namathuba apha apha aphezulu. Ukuqulunqwa kwe-raclette sele sekudala kunene kodwa ukuthandwa kwayo akuyekanga, kwaye akukho ngaphandle kwesizathu.
Akukho ndawo inokuthi izinto ezahlukeneyo zokuzonwabisa zingabumbene kwaye zihambisane kunye neentlanzi kwindawo efanelekileyo kwaye, njengoko kushiwo ngaphambili, ukuzonwabisa akunakwanela. Apha akudli nje kuphela, kodwa inkampani iyanandipha.
I-recipe yesaladi ye-Potato | Ukutya nokusela
Ikhasi lokubala ukusela ikhofi